धमला पत्नि एलिजाको भव्य पार्टीमा आँचल र उदिप पुग्दा तारिफ गरेर थाकेनन्
काठाडौँ । नायिका एलिजा गौतमको जन्मदिन धुमधामले मनाइएको छ । एलिजाको जन्मदिनको अवसरमा नायिका आँचल शर्माको जोडी, दुर्गेश थापा, नरेश भट्राई लगायतका चर्चित कलाकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । जन्मदिनको अवसरमा पत्रकार तथा एलिजाका पति ऋषि
दुनियाँ चकित पार्दै आएका यी अचम्मका दाजुभाइ, यिनिहरुको क्यरिचेर देखेपछि रोकिने छैन् हाँसो (भिडियो)
काठमाडौ । आजकल कमेडी च्याम्पियनको सिजन पनि चलिरेहेको छ जहा सयौ प्रतियोगीहरुले भाग लिएका छन । कमेडीको कुनै सिमा हुदैन र यसले पक्ष बिपक्ष पनि हेर्दैन, यसले केवल दर्शकलाई मनोरन्जन दिलाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।
नेपाल आइडल सिजन ३ की बिजेता सज्जा चौलागाईको स्वर रहेको गीत “मयालु” सार्वजनिक
काठमाडौँ । गायक तथा मोडल देबेन्द्र बब्लुको नयाँ गीत “मयालु” सार्वजनिक भएको छ । टिपीकल शैलीमा तयार पारिएको गीतमा बब्लुसँगै नेपाल आइडल सिजन ३ की बिजेता सज्जा चौलागाईको स्वर रहेको छ । गीतमा स्वंय बब्लुले
चितवन-चितवनमा निर्माण हुँदै गरेको वहुप्रतिक्षित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक अभाव सिर्जना भएको छ । निकै ठूलो लगानीमा सुरु गरिएको रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक अभाव भएपछि धुर्मुसको टोली मेचि महाकाली अभियानमा निस्किएको छ ।धुर्मुस
'फुलवुट्टे सारी' गाएकी युगान्डाकी गायिका भन्छिन, ‘नेपाली केटासँग बिहे गरेर नेपालमा नै घरजम गरेर बस्ने मन छ
काठमाडौं । नेपाली चर्चित गीत फुलवुट्टे सारी गाएर चर्चामा आएकी युगान्डाकी गायिका डे क्याप्टेन वियोन्सेले नेपाल युवकसँग पिबाह गर्ने बताएकी छिन् । हालैको एक अन्तरवार्तामा उनले नेपालप्रति आफ्नो निकै ठुलो प्रेम रहेको उल्लेख गर्दै आँफुलाई
काठमाडौं- राजेन्द्र खड्गीको नाम लिनासाथ हेटौँडामा रहँदा उनले एक मुक्काले राँगा ढालेको प्रसंग उप्किहाल्छ । कतिपय यसलाई पत्याउँछ, कतिपय अझै पनि ‘हावा’ भन्दै उडाउँछन् । तर, खड्गीका बाल्यकालका साथी राजमान महर्जनलाई यो यथार्थ भएको दाबी गर्छन्
महानायक काण्डपछि दीपक दीपाले मुन्द्रेसँग दुरी बडाएकै हुन् ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र जगतको सफल टिमका रुपमा मानिएको ‘छक्का पञ्जा’टिममा जितु नेपाल औपचारीक रुपमै वाहिरिएको देखिएको छ । हास्यटेलिश्रंखला हुँदै चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेको टिम छक्का पञ्जा सबैभन्दा शक्तिशाली समुह मानिन्छ । त्यसको एक
साहासी सदिक्षालाई सुरक्षा थ्रेड, अमेरिका जान रोक्ने तयारी समेत भएको गरिन खुलासा (भिडियो)
मोरङ । उर्लाबारी नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय प्रविण बाँस्तोलको गत पुस ५ गते भएको मृ त्यु प्रकरणमा मृ त्यु वा ह त्याको कारण र संलग्न व्यक्तिसम्म प्रहरी नपुग्दै सामसुम हुनै लागेको थियो । तर जब
रचना रिमालको स्वर र धुर्मुस र सुन्तलीको अभिनयमा ‘ओई मेरो परान’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं- सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ को अभिनयमा ‘ओई मेरो परान’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ।लोकराज अधिकारीको शब्द रहेको गीतमा राजेन्द्र बजगाँइको संगीत रहेको छ। त्यस्तै, गीतलाई रचना रिमाल र भक्त प्रधानले स्वर दिएका
काठमाडौं- गायक रामकृष्ण ढकालको स्वरमा रहेको उकालीको त्यो पल्लो डाडाँ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा खोटाङको रावा बेशी गाउँ पालिकाको वडा न. १ मा पर्ने कुभिण्डेको रमणिय दृश्यहरुलाई कैद गर्दै माओवादी द्वन्दकालको घटनालाई
कर्कट राशिका लागि यस्तो नयाँ वर्ष २०७८ साल , हेरौँ वार्षिक राशिफल
काठमाडौँ । कोरोना महामारी र सयको चपेटामा परेको वि।स। २०७७ साल सकिनै लागेको छ। एक वर्षसम्म प्राय विश्वका प्रायदेशका मानिससँगै हामी धेरै नेपालीलाई खूशी र सन्तुष्टी भने मिल्न सकेन। अब आगामी वर्ष कस्तो रहला भन्ने